Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy itsoahana adidy ny fisehon’ny sarotra | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy itsoahana adidy ny fisehon’ny sarotra
Tsy mora ny fiandraiketana adidy. Samy mahalala izany eo amin’ny fanefana ny anjarany isaky ny andavanandro izao. Raha ny fitazanana avy aty ivelany dia tsy mampiraika ny tompon’andraikitra ambony loatra ny fanefana izany. Ny maha maika azy ireny dia ny fiarovany ny toerany toy ny tranga ambaran’ny adilahy pôlitika. Sarotra anefa ny hanaovana safobe mantsina amin’ny fiheverana fa toy izany daholo ny fihetsik’ireo mpanao pôlitika. Diso koa ny fanamelohana raha mifamaly noho ny tsy fitovian-kevitra. Tsy mitovy lalandava ny hevitro sy Jean Max Rakotomamonjy izay iarahako mitafa sy mifanakalo hevitra ombieny ombieny. Samy manazava ny azy ary hita fa indraindray tsy mitovy ny fomba fijery. Mety ho toy ny atsimo sy avaratra mihitsy aza ny fomba fihevitra. Tsy izay anefa no antony itsaran’ny tena azy na avy any aminy anaovany faneriterena ankolaka mba haneho ny heviny ka hampandefitra ny an’ny tena.
Io olona io dia misedra fotoan-tsarotra amin’izao fotoana izao. Misy ny mpandatsa azy amin’ny “akory izay! Izany no vokatry ny filolohavana siny roa”. Eo koa ny adidy amin’ny maha mpitarika voalohany ny tenany ao amin’ny antoko misy azy. Tsy ny Leader-Fanilo irery eo amin’ny sehatra pôlitika no misedra fitresatresahana. Na fony andron’Itompokolahy Razafimahaleo aza dia efa nisy foana ny tetika mikasika ny firaisan-dia amin’ny tarika hafa izay tsy tsapan’ny mpikambana rehetra ny antony ary nahatalanjona ny olona aty ivelany. Niakatra fitsarana ny olana ankehitriny, ary na eo aza ny didy efa nivoaka dia mbola manambana hiitatra ny fery.
Amin’ny maha filohan’ny Antenimierampirenena azy koa dia maro no mihevitra fa izy no tompon’antoka miantsoroka ny fanapahan-kevitra ao amin’io antenimiera io. Diso angamba izany. Manao an’ireo solom-bavam-bahoaka 150 hafa ho tsinontsinona izany. Samy manana ny maha izy azy ny tsirairay amin’izy ireo, ka izay tapaky ny maro no lasa fanapahan’ny Antenimiera amin’ny anaran’ny vahoaka. Ny anjaran’ny filoha dia ny fandrariana ny fizotry ny Antenimiera ao amin’ny làlan-dalàna eo am-panefana ny adidiny araky ny fahefany.
Tazana ihany fa tofoka sady reraka andriamatoa Rakotomamonjy ary azo ahiana fa kitikitihin’ny faka-panahy indraindray amin’ny fametraham-pialana. Mety handalo izany, nefa matoa tsy niseho dia afaka heverina fa mahery kokoa ny toe-tsaina mikasika ny fanajana adidy noraisina sy ny fahatsapana fa rehefa manonja ny rano, vao mainka miha-mitombo adidy ny kapitenin-tsambo.